FAKANA FITAOVAM-PANJAKANA AN-TSOKOSOKO : Nidoboka eny Antanimora i Hugues Ratsiferana
Eny amin’ny fonjan’ Antanimora no miandry ny fotoam-pitsarana azy indray i Hugues Ratsiferana. Fakana sy fitaterana an-tsokosoko ireo fitaovam-piasana maro izay fananam-panjakana madiodio no anisany vesatra hiampangana azy. 3 février 2019
Tsy hisy intsony tsy matimanota. Ny faran’ny herinandro lasa teo iny no niakatra fampanoavana, tetsy amin’ny tribonaly Anosy ilay raharaha an’i Hugues Ratsiferana. Ity farany dia olona manana ny maha izy azy tanteraka sady efa nitana andraikitra ambony teto amin’ny firenena. Mpanolotsaina manokan’ny Filoha teo aloha, Hery Rajaonari-mampianina ny tenany ary anisan’ny lohadohan’ny mpisorona eo anivon’ny antoko Hvm.
Ankoatra izay, izy ihany koa no solontena maharitry ny vondrona iraisam-pirenen’ ny firenena mampiasa manontolo na ampahany ny Teny frantsay, tale jeneralin’ny AMTP ary efa tale jeneralin’ny orinasa Air Madagascar ihany koa no mpanamory fiaramanidina. Herinandro vitsy lasa izay no nahatratrarana an’i Hugues Ratsiferana namoaka an-tsokosoko ireo fananana sy fitaovam-panjakana, izay tao amin’ ny birao fiasany teny amin’ny lapam-panjakana eny Ambohitsorohitra. Rehefa tafavoaka tao an-dapa ireo fitaovana marobe ireo dia notateriny nankany an-tranony. Tsy vitan’izay fa nandritra ny fidinana ifotony nataon’ny mpitandro filaminana tao amin’ny trano fonenany dia mbola tra-tehaka tao ihany koa ireo fitaovam-piasana an’ny fanjakana maro toy ny solosaina, latabatra izay sokajiana ho tafiditra ao anatin’ny halatra bevava.
Nosamborin’ny mpitandro filaminana avy hatrany i Hugues Ratsiferana ary nisy ny famotorana sy ny fakana am-bavany natao azy niarahan’ilay sampana mpanao fanadihadiana ikambanan’ny zandary sy ny polisim-pirenena. Niakatra fampanoavana ny raharaha taorian’izay. Ity mpanolotsain’ny Filoha teo aloha sy ilay olona niray tsikombakomba taminy tamin’ny famoahana ilay birao teny Ambohitsorohitra no nohainoan’ny fitsarana nandritra ny ora maromaroa. Naiditra am-ponja vonjimaika eny Antanimora izy ireo mandra-piandry ny fotoam-pitsarana azy ireo.
Ny 12 febroary ho avy izao no fantatra fa hiverina hiakatra eo anoloan’ny fampanoavana indray ny raharaha. Ankoatra ny fakàna an-tsokosoko ny fananam-panjakana izay anisan’ny vesatra hiampangana azy voalohany dia voalaza fa mbola ao ihany koa ireo raharaha hafa hanenjehana ity farany, araka ny loharanom-baovao voaray. Andrasana indray araka izany izay didim-pitsarana havoakan’ny fitsarana amin’io faha-12 febroary io.